လူရည်ချွန် လူမှုရေး ကွန်ယက်( facebook ) လူရည်ချွန် မှသည် ရွှေရတုပွဲ ယာယီအမှုဆောင်အဖွဲ့| Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ပြေးခုန်ပစ်အားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ မြန်မာမွတ်စလင် ဦးမောင်လှ
အလွန်အကျွံအမျိုးသားရေးဝါဒ သတိထားဖို့ NLD ပါတီ အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့တွင် သတိပေး »
Luyechun Dr. Daw Tint Tint Kyi wrote>>>
ဘဝ၏ ဖြစ်ချင်တာ ၊ ဖြစ်သင့်တာများစွာထဲမှ ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခု ကိုစလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါက မမှားပါ။
မြန်မာ့မြေတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်(၅၀) ၁၉၆၄ မှသည် ၁၉၈၈ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ကျောင်းသားလူငယ်
လေးများ၏ပညာရည်ချွန်မှု အထူးသဖြင့် ဘက်စုံထူးချွန်မှုကို ချီးမြှောက်ခဲ့သောစီမံကိန်းတစ်ခု ရှိခဲ့ရာ
နှစ်စဉ် (၃၀၀) ကျော်ခန့် ဖြင့် ၂၅ နှစ်အတွင်း( ၇၉၀၈ ) ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။ နှစ်ထပ်၊ သုံးထပ်စသည်အားဖြင့် (၇) ထပ် (၇) ကြိမ်အထိ ကြိမ်ရေ များစွာ ရရှိခဲ့သူများကို စစ်ထုတ်ရေတွက်ပြီး နောက်စုစုပေါင်း ( ၅၁၅၈) ဦးအဖြစ်ရေတွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုစာအုပ်( အတွဲ ၁) တွင် ထိုလူငယ် လူရည်ချွန်များထဲမှ(၇၀၀) ၏ ဘဝ ကောက်ကြောင်းကို ခြေရာခံနိုင်ပါသည်။
(၁၉၆၄မှ ၁၉၈၈)ကျောင်းသား လူငယ်များသည်ယခုအခါ လူကြီးပိုင်းရောက်လာခဲ့ပြီ။သူတို့ စိတ်ဓါတ်များသည်အစဉ်
နုပျိုဆဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ ရပါလိမ့်မည်။ငယ်စဉ်ကပင် ကြီးလာလျှင် ပြန်လည်စုစည်းကြရန် ပြင်းပြသောအာသီသအစဉ်အမြဲ ရှိခဲ့ကြပါသည်။ထို စိတ်ဓါတ်အခံများကြောင့်လည်း ပြန်လည်စုစည်းမှုအရှိန်များအားကောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ကူးများကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ နှစ်(၅၀) ခြေရာများကောက်နိုင်ရေးအတွက် ပြန့် ကြဲနေသည်များ
လက်တွေ့ စတင်စုစည်းရာနေရာမှာ လူရည်ချွန် မျိုးဆက် (၁၉၈၈) ဖြစ်သည့် ကိုစိုးနန္ဒာ နှင့်ကို မျိုးကြည်သာတို့ 
သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေတို့ စုစည်းကြသည့် လူမှုရေး ကွန်ယက်( facebook ) တွင်ဖြစ်၏။
အစတွင် open group ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၁တွင် closed group အဖြစ်ပြောင်းခဲ့သည်။နောင်ဖြစ်ထွန်းလာမည့် လူရည်ချွန်အဖွဲ့ 
အတွက်လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့်အချက်အလက် ပိုင်းဆိုင်ရာပံပိုးမှုများ ကို ထိုအဖွဲ့ ဝင်များအချင်းချင်း အဝေးမှစွမ်းနိုင်သမျှစုစည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည်။
ထို လူငယ်မျိုးဆက်မှ စခဲ့သည်ကို၊ လက်တွဲခဲ့သူ့စီနီယာ လူရည်ချွန် ကြီးများဖြစ်သည့် ဦးဖေသက်ခင်၊ ထို မှ ဦးနေဦး၊ ဦးသန်းဝင်း၊ ဦးကိုကိုကြီး တို့ အပါအဝင်အခြားလူရည်ချွန်များဖြစ်ပါသည်။
ထိုနေရာတွင် ဖြစ်ချင်တာတွေ ၊ ဖြစ်သင့်တာတွေကို ဆိုးကောင်းကျိုးကြောင်းဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်များကိုစရန်စိတ်ကူး ခဲ့ကြပါသည်။လူရည်ချွန်စီမံကိန်းကဲ့သို့ လူငယ်စီမံကိန်းပေါ်ပေါက်ရေးဖြစ်၏။
၁၉၈၈ နွေရာသီလူငယ်စခန်းတွင် နောက်နှစ်စခန်းရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း မျှော်လင့်စရာမရှိခဲ့ပေ။
သို့ သော်မမျှော်လင့် သည်များဖြစ်ခဲ့ပြီး ရပ်နားခဲ့သော အစီအစဉ်မှာ၂၀၁၂ နွေရာသီတွင်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်စေလိုသည့်ဆန္ဒများကြောင့် လူရည်ချွန်များအားပါးတရကြိုဆိုမှုခဲ့ကြသည်။လက်ရှိဘဝမှ
လူငယ်ဘဝ သို့ လွမ်းမောစရာများ ၊ ပီဘိဖြူစင်လှသော ပျော်ရွှင်စရာများကို ပြန်လည် ပြောကြားရင်းရှင်သန်နေသော ထိုစာမျက်နှာများသည် မျိုးဆက်ကွာဟမှု များကို ကျဉ်းမြောင်းစေသည်။ မတူညီသော အမြင်များကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး
ရှေ့ မှီနောက်မှီ ဖြတ်သန်းမှုများကိုပြန်ပြောင်း လွမ်းမောရင်း မှ လူရည်ချွန်စာရင်းတိကျရေးအားထုတ်မှုများ၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဆက်သွယ်မှုရရန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းရေးအစီအစဉ်များစဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားခဲ့ရာ
ရန်ကုန်မြို့ ရှိအခြေခံပညာဦးစီးဌာန (၁) မှဦးစိုးဝင်းကိုဆက်သွယ်ရန်ဦးစိုးမြင့်(ရဲထွဋ်နီ)တို့ ကူညီမှုကြောင့်ထိန်းသိမ်းထားသောစာရင်းအပြည့်
အစုံကို စာကြည့်တိုက်တွင်တွေ့ ခဲ့ရပါသည်။ ဆရာဦးညွန့် မောင် (စီမံကိန်းကော်မတီ၏အတွင်းရေးမှူး) (ယခုကွယ်ကွန်)
ကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးနှင့်ပါတ်သက်ပြီးပြုစုစုဆောင်းထားရာ ဆရာကြီးဦးသန်းဦးမှဆက်သွယ်ပေးခြင်း
တွင်လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ထိုစာကြည့်တိုက်များပိုမိုဖွံ့ ဖြိုးရေရှည်တည်တံ့ရေးပံ့ပိုးရန်အဖွဲ့ မှအားပေးသင့်ပါသည်။
(၇-၇-၁၃) တွင်ရန်ကုန်မြို့ တွင် မျိုးဆက်မတူသော၊တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးယခင်မတွေ့ ဘူးသော သူများအပါအဝင်လူရည်ချွန် မိတ်ဆွေ(၁၄) ဦး စတင် တွေ့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ လူရည်ချွန်အဖွဲ့ ပြန်လည် ပေါ်ထွက်လာရေးစိတ်ပြင်းပြလှသည့်
လူရည်ချွန်တို့ ပထမဆုံး မြေပြင်တွင်တွေ့ ဆုံခဲ့ခြင်းပင်။
ထိုမှသည်လစဉ်တွေ့ ဆုံပွဲများကျင်းပကာ စုစည်းနိုင်သည်များကို ပေးပို့ ဆက်သွယ်ရရှိသည့်အတိုင်း (၅-၁-၁၄)တွင် စာအုပ်အသွင်ကူးပြောင်းလာသည်ကို ယခုအတွဲ (၁) တွင် တွေ့ မြင်နိုင်ပါပြီ။ နိုင်ငံပိုင် လူသားရင်းမြစ်တစ်ခု ကိုရှာဖွေတူးဖော်ကြည့်ကာ မြန်မာ့သမိုင်းထဲတွင်ပုံထင်ကြည့်နိုင်မည်လားဟု ကြိုးစားဖြစ်ပါသည်။
လူရည်ချွန်များ ပြန်လည်စုစည်းခြင်းကို စာနယ်ဇင်းသတင်းမီဒီယာများက အားပေးကြသည့်အတွက်ကြောင့်လည်း အချိန်တိုအတွင်းလျှင်မြန်သော အရှိန် ဖြင့် အချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ရပါသည်။ စာတိုက်မှပေးပို့ ရန် ရုံးဌာန လိပ်စာကို ဦးမောင်မောင်လွင်၊ စစ်တုရင်အဖွဲ့ ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည်။အားလုံးက မိမိနိုင်သည်၊စွမ်းသည်များဖြင့်ပံပိုးပေးခဲ့ကြရာရန်ပုံငွေများစွာမတောင့်တင်းသော်လည်းအလုပ်ရလာဒ်များဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါသည်။
အီးမေးလ်ကို ဦးကျော်ငြိမ်းအေးမှတာဝန်ယူခဲ့၏။ EMG ဦးသန်းထွဋ်အောင်၏ ကူညီပံပိုးပေးမှုများကကျောရိုးသဖွယ်ရှိခဲ့သည်။
လူရည်ချွန် အများစုကို ဝန်ထမ်းကောင်းတွေဖြစ်သည်ဟု စောစောပိုင်းမျိုးဆက် မှမှတ်ချက်ပြုကြပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ရွှေ မြန်မာတို့ ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးဆန့် ခဲ့ရာ ရေကြည်ရာမျက်နုရာ ရောက်ရှိနေသည်များလည်း ရှိနေကြောင်း သတိထားမိပါသည်။ ထိုသူတို့ ထံမှအတွေ့ အကြုံပညာများကို နိုင်ငံအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများအတွက်နိုင်သမျှ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်လားအဖွဲ့ မှ ရည်မှန်း မျှော်လင့်ထားကြ ပါသည်။
ယခုစာအုပ်အတွဲ (၁) တွင် ပေးပို့ ဆက်သွယ်သူ (ရ၀၀) နီးပါးခန့် ကို နှစ်အစဉ်လိုက်စီစဉ်ပြုစုထားပါသည်။
လူရည်ချွန်နံပါတ်များကို အဖွဲ့ မှ ပူးတွဲပါ စီဒီခွေ ရှိ ဇယားအတိုင်း နှစ်အစီအစဉ်အတိုင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ကာ (၇) ထပ်ကွမ်းရသောကြာင့် နံပါတ်(၇) ခုရှိသည့်တိုင် အစောဆုံးနှစ်မှနံပါတ်ကို သာ ယင်း၏ နံပါတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။စီမံကိန်း အပေါ် သုံးသပ်စာတမ်းကိုလည်း သီးသန့် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။
လူရည်ချွန်(၅၀၀၀) ကျော်၏ အခြေအနေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး ၊ အများပြည်သူတို့ ထံ သတင်းစကားပါးနိုင်ရေးအတွက်
ပြည်ထောင်စု ကိုကိုယ်စားပြုသော ကျောင်းသားလူငယ်တို့ ဖြစ်ခဲ့သည့်၊ ဖြစ်နေသည့် လူသားရင်းမြစ်နှင့်ဆိုင်သော မှတ်တမ်းဖြစ်သည်။အချိန်တိုအတွင်း အခက်အခဲများထဲမှ ရနိုင်သမျှ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့်ပြီးပြည့်စုံမှု အားနည်းချက်များရှိနိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားပါဦးမည်။
ယခုကဲ့သို့ မှတ်တမ်း စာအုပ်များ ပေါ်ထွက်လာခြင်းမှာလည်းတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း အစွမ်း မဟုတ်၊
အဖွဲ့ လိုက်ဆောင်ရွက်မှု၊ တစ်ဦးချင်းတာဝန်ယူမှု အထူးသဖြင့်ပြင်းပြသောစိတ်အားထက်သန်မှုများဖြင့်စိတ်ဝမ်းလက်ညီ
အဖွဲ့ အနေဖြင့် လူအား ငွေအား ထက်သန်စွာ အချိန်ပေး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြသော ၊နိုင်ငံ အကျိုးပြုလုပ်ငန်း
များကို တတ်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ခဲ့၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်သောလူရည်ချွန်များအပါအဝင် မိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့ အား လေးစားတန်ဘိုးထားကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
လူရည်ချွန် (၇၀၀) ခန့် ၏အချက်အလက်များပါဝင် သည့်ယခုစာအုပ်အတွဲ(၁) ကို စုစည်းပြီးနောက်ရရှိခဲ့သည့် များစွာသော ရလာဒ်ကောင်း များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။အတွဲ (၂) ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါဦးမည်။
ထိန်းသိမ်းထားသော မှတ်တမ်းများကြောင့် စာရင်းပြုစုရာတွင်နှင့်စုဆောင်းခဲ့သူဒေါ်ခင်သန်းဦး၊ဦးတင်မင်း၊ဒေါ်မေသင်းလှိုင်၊
ဒေါ် သူဇာရှိန်၊ ဒေါ်တင့်တင့်ကြည်၊ဦးအောင်ဇော်ဦး၊ ဦးအောင်ဇော်မျိုး နှင့်ပညာတန်ဆောင်စာကြည့်တိုက်နှင့် အခြေခံ(၁)စာကြည့်တိုက်များကိုများစွာအထောက်အကူရပါကြောင်းပြောလိုပါသည်။
၁၉၆၄ -တရားမျှတသောယှဉ်ပြိုင်မှုများဖြင့် ကျောင်းသားလူငယ်များအကြား ရွေးချယ်ယှဉ်ပြိုင်ရသည့်လူရည်ချွန်
၁၉၈၈- (၂၅) ကြိမ်မြောက်လူရည်ချွန်စီမံကိန်းသည်နောက်ဆုံးနှစ်အဖြစ် မရည်မှန်းခဲ့သော်လည်း
နိုင်ငံတော်၏ ပြောင်းလဲမှုများအကြားတွင် ရပ်နားသွားခဲ့ရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီ-လူရည်ချွန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူအချင်းချင်းပြန်လည်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးနိုင်သည့်လူမှုရေးစာမျက်နှာ
တစ်ခုကိုfacebook လူမှုစာမျက်နှာတွင် စတင်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၂ မတ်လ တွင် အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(၁) စာကြည့်တိုက်တွင် (၁၉၆၄-၈၈)လူရည်ချွန်စာရင်းများကို တွေ့ 
၂၀၁၃ မတ်လ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုဘက်စုံထူးချွန်မှုအပေါ်မူတည်ကာ
၂၀၁၃ ဇူလိုင်လတွင် (၁၉၆၄ မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်) အတွင်းရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော လူရည်ချွန်ကျောင်းသား(၁၄) ဦး ရန်ကုန်မြို့ 
တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ ဆုံခဲ့ကြသည်။ ထို့ နောက်တွေ့ ဆုံပွဲများ၊ အလုပ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးများကို စဉ်ဆက်မပြတ်
အားထုတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာလဆန်းအထိ လစဉ်တွေ့ ဆုံပွဲ ကြီး(၅) ကြိမ် နှင့် တနင်္ဂနွေအလုပ်အစည်းအဝေး
၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၂ တွင် ဆရာကြီးဦးသန်းဦးကို တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ ထို့ နောက်ဆရာကြီးဦးထွန်းအောင်
၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီတွင် ရွှေရတုအကြိုတွေ့ ဆုံပွဲအဖြစ် လူရည်ချွန်မှတ်တမ်း အတွဲ(၁) ကိုစတင်ထုတ်ဝေပါသည်။
၂၀၁၄ ဧပြီလတွင် လူရည်ချွန် ရွှေရတုပွဲ ကို ကျင်းပရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
ယာယီအမှုဆောင်အဖွဲ့ ကိုယ်စား မှတ်တမ်းတင်သူ
This entry was posted on December 16, 2013 at 1:23 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “လူရည်ချွန် လူမှုရေး ကွန်ယက်( facebook ) လူရည်ချွန် မှသည် ရွှေရတုပွဲ ယာယီအမှုဆောင်အဖွဲ့ ”
TQ and congratulations Dr TTK… But you need to mention that you have started the transition of virtual to real life struggles by starting searching and later recorded the list. Please mention the 14 persons in first meeting and the persons who contributed to haveafinal list. (Sorry I failed to participate in these difficult time consuming process.) I really appreciated and thanks all of you.